Situation covid-19 du 08 août 2021 - ewa.mg
Situation covid-19 du 08 août 2021
News - Santé - Situation covid-19 du 08 août 2021
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Situation covid-19 du 08 août 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Situation covid-19 le 8 août
D’après le bilan épidémiologique rapporté par le CCO ce 9 août 2021, 5 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus sur les 211 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 42.781 le nombre total des personnes infectées par le virus depuis mars 2020. La répartition par région de ces nouvelles contaminations se présente comme suit : Analamanga (1), Vakinankaratra (2), Anösy (1) et Atsimo Atsinanana (1).
Selon toujours ce dernier rapport, 11 personnes ont recouvré la santé. De ce fait, le bilan des patients guéris s’établit à 42.456 depuis l’apparition de la pandémie de covid-19 dans le territoire malagasy. De plus, 24 malades parmi ceux en cours de traitement développent une forme grave. Par ailleurs, aucun nouveau décès n’a été signalé. Par conséquent, le nombre des victimes reste à 948.
L’article Situation covid-19 du 08 août 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Saripika: manana ny toeram-pampirantiany i Rijasolo
Mpaka saripika iray amin’ireo manana traikefa matanjaka. Sehatra maro no efa nahitana azy sy ny sanganasany. Ankehitriny, nahatafita dingana iray lehibe i Rijasolo…Tsy ny eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ihany no ahitana ny famirapiratan’ny tanora malagasy. Tsikaritra koa izany eo amin’ny sehatry ny zavakanto. Taona vitsy lasa izay, olana goavana nosedrain’ny mpanao hosodoko, mpanakanto araka endrika amam-bika ary ireo milomano ao amin’ny tontolon’ny sary isan-karazany, ny tsy fisian’ny toeram-pampirantiana.Amin’izao fotoana izao, misy amin’izy ireo ny miezaka fa tsy miandry fotsiny ny vahaolana entin’ny fanjakana ka manangana toeram-pampirantiana na « galerie » azy manokana. Anisan’ireny i Rijasolo, iray amin’ireo fanta-daza sy manana ny maha izy azy amin’ny fakana sary kanto sy matihanina. Araka ny fantatra, misokatra ho an’ny rehetra ny toeram-pampirantiany eny Faravohitra eny. Toerana tony sy milamindamina, ahafahana mankafy ireo sanganasany sy mitafa amin’ny aingam-panahiny.Afaka roa volana eo ho eo, izany hoe, amin’ny volana septambra, hihazo an’i Frantsa i Rijasolo, hanatanteraka fivahiniana arahim-pamokarana na « résidence de création », any amin’ny Cité internationale des arts. Raha tsiahivina, ity no anisan’ny loka goavana azo tamin’ny fifaninanana « Loka Paritana » andiany fahatelo.Haharitra telo volana ny diany ka, aorian’izay, haranty any an-toerana ny zava-bitany. Tsy ho diso anjara amin’izany ny eto an-tanindrazana, toy ny nataon’ireo mpandresy tamin’ny andiany roa voalohany tamin’ity fifaninanana ity.Landy R.L’article Saripika: manana ny toeram-pampirantiany i Rijasolo a été récupéré chez Newsmada.
Fanakatonana toeram-pitsaboana :: Hafindra eny amin’ny hopitaly ireo fitaovana sasany nitsaboana Covid-19
Nanome baiko tamin’ny fanakatonana an’ireo ivon-toerana fitsaboana Covid-19 (CTC) teny Ivato sy ny teny amin’ny Lisea teknika Alarobia, ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry nandritra ny lahateniny, tamin’ny alahady, noho ny fahavitsian’ny marary teny amin’ny CTC Ivato sy ny tsy fisian’ny olona tsaboina valanaretin’ ny Covid-19 intsony, teny Alarobia. Haparitaka eny amin’ireo hopitaly sy ny toerana mbola mandray mararin’ny Covid-19 ny fitaovana nampiasaina sy efa vonona tamin’ireo CTC ireo. Efa misy ny fandaminana napetraky ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka sy ireo tompon’andraikitra tamin’ireo ivon-toerana ireo. “Nandamina ny fitaovana rehetra tamin’ireny ivon-toerana ireny ny ekipan’ny minisitera. Misy no alefa eny amin’ny hopitaly mila an’izany, miaraka amin’ny fandaminana maty paika. Hipaka any amin’ny vahoaka ny fampiasana an’ireny fitaovana ireny”, hoy ny minisitra Rakotovao Hanitrala Jean Louis. Maro no miahiahy amin’ny mety hisian’ny fiverenan’ny Covid-19 andiany faharoa. Nanamafy anefa ny minisitra fa tsy ho tonga amin’ izany isika raha manaraka an-tsakany sy an-davany an’ireo fepetra napetraka. Efa mivonona kosa ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka raha sanatria ka miverina tokoa ny valanaretina. L’article Fanakatonana toeram-pitsaboana :: Hafindra eny amin’ny hopitaly ireo fitaovana sasany nitsaboana Covid-19 est apparu en premier sur AoRaha.
Mamie Kelin’i Jesosy: manomana hetsika lehibe…
Mandalo an-tanindrazana i Mamie Kelin’i Jesosy. Efa an-taony maro monina any ivelany ity mpanakanto mpivoy ny hira fiderana ity ka izay ny antony tsy nahahenoana firy azy. Nanararaotra ny fotoana andalovany, nihaonany tamin’ny mpanao gazety, sy nilazalazany ny fandaharam-potoany, Razafisoarimalala Maminirina Leonnette na i Mamie Kelin’i Jesosy. Anisan’ny goavana indrindra ny fanomanana hetsika lehibe amin’ny taona ho avy. Ho fanomanana izany sahady ny rakitsary vaovao, hivoaka tsy ho ela, araka ny fanazavany. 30 taona ilomanosana eo amin’ny tontolon’ny hira fiderana izy. Na any ampita aza, tsy mitsahatra amin’izany i Mamie Kelin’i Jesosy. Niara-dalana amin’izay lalany izay ny sehatry ny fanabeazana. Nanangana fikambanana iray, miahy ny tanora niharan’ny herisetra ara-nofo, mantsy izy, any ivelany. Anisan’ireo tetikasany manaraka ny hanitarana izany eto Madagasikara ka any Ambositra ny ivony. Manome fotoana tsy ho ela ny mpiray tanindrazana izy, araka izany. Zo ny Aina L’article Mamie Kelin’i Jesosy: manomana hetsika lehibe… a été récupéré chez Newsmada.
Ankadindramamy: nosamborin’ny polisy ilay raim-pianakaviana namono ny zanany
Niharan’ny famonoana narahina fampijaliana nataon-drainy, 51 taona, ny ankizilahy iray 6 taona, ny talata teo teny Ankadindramamy. Tratra ihany anefa izy…Ny ampitson’io (ny alarobia 30 septambra 2020 io), nisy nanaparitaka ao anaty tambajotran-tserasera “facebook” ilay ankizy niharan’ny famonoana ka nanokatra avy hatrany fanadihadiana ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona mikasika ity raharaha ity. Tonga teny an-tranon’ilay raim-pianakaviana ny polisy, saingy ireo zanany niharan’ny famonoana miaraka amin’ireo iray tampo aminy no tratra tao an-trano. Nentin’ny polisy nanaraka azy avokoa ireo zaza miisa enina hiarovana ny ain’izy ireo. Nandri­tra ny fanadihadiana no nahalalana fa efa mikapoka azy ireo hatrany ity rainy ary tamin’ny vono farany nahazo ity zaza ity, naratra ny masony sady mangana ny tarehiny sy ny vatany. Nisy ny fikasihan-tanana nahazo ilay zaza ka torana tsy nahatsiaro tena mihitsy izy, araka ny fana­zavan’ny polisy. Tsy hita ny na­lehan’ilay raim-piana­kaviana, saingy tratran’ny vela-pandriky ny polisy izy. Ni­aiky ny heloka nataony izy nandritra ny famotoran’ny polisy, ilay zanany naratra kosa, efa nahazo fitsaboana. “Tsara ny manamarika ho antsika ray aman-dreny fa tafiditra ao anatin’ny olona marefo ny zaza ary misy ny lalàna miaro sy mifehy azy ireny. Tsy midika akory izany hoe tsy azo anarina ny za­natsika fa ilaina ny fomba fahaiza-miteny sy manasazy azy mba tsy ho lasa famonoana azy indray ny fibedesana atao aminy”, hoy ny polisy.Jean ClaudeL’article Ankadindramamy: nosamborin’ny polisy ilay raim-pianakaviana namono ny zanany a été récupéré chez Newsmada.
Taorian’ny feo fanairana sy niparitaka tao amin’ny tambajotran-tserasera, afakomaly, mahakasika ilay zandary nikasi-tanana vehivavy bevohoka iray, nisokatra avy hatrany ny fanadihadiana sy ny famotorana. Vokany, voamarina ilay tranga niseho tao Ankarimbe, distrikan’Analalava, ny marain’ny alatsinainy teo. « Nosazina, araka izany, ilay zandary nandika fitsipika sy nanao herisetra na tsy nitory azy aza ilay voakasi-tanana », hoy ny fanazavan’ny Zandarimariam-pirenena, loharanom-baovao. Fantatra fa zandary, lehiben’ny « poste fixe » ao Ankarimbe, izy ary nesorina aminy izany andraikiny izany.Tsiahivina fa nifanena tamina ramatoa iray tsy nanao arotava io zandary io. Nanevateva azy rehefa noteneniny mikasika izany ilay vehivavy. Tsy nahatanty izany anefa ilay lehiben’ny “poste fixe” ka namelaka ilay ramatoa. « Nangataka sazy hafa rehefa tsy nanaiky nanao “pompe” ilay vehivavy noho izy bevohoka. Fihetsika nahatezitra ilay zandary izany. Nofelahiny ilay vehivavy ka torana », hoy ny filazan’ny loaharanom-baovao iray hafa. Raha ny vaovao farany, hanao fanambarana mahakasika ny tranga ilay ramatoa niharam-boina io ao Ambanja.Nanome baiko hentitra sy fampitandremana ny zandary manerana ny Nosy, araka izany, ny Zandarimaria ary maneho koa fialan-tsiny feno amin’ilay renim-pianakviana. Manentana ny rehetra izy ireo hifandray amin’ny « service de traitement des doléances de la gendarmerie » amin’ny laharana 034 12 005 25 na ny 034 14 013 88 raha misy seho na tranga toy izao.Henintsoa HaniL’article Nikasi-tanana vehivavy bevohoka: nesorina amin’ny andraikiny ilay zandary a été récupéré chez Newsmada.
Boriborintany faha6: vita ny lalankely ao Antanjombe Avaratra
Tsy ho very maina ireo vato sy tara amin’ny fanamboaran-dalana sy sisin-dalana izay vatsian’ny Vondrona eoropeanina vola eto Antananarivo Renivohitra amin’izao fotoana izao. Vato marobe no azo ary ampiasain’ny CUA hanamboarana lalankely. Tanjona ny hanalana fahasahiranana ny mponina.Raha ho an’ny boriborintany faha-6, vita tara ny lalankely mirefy 120 metatra eny amin’ny fokontany Antanjombe Avaratra manakaiky ny EPP ao an-toerana. Namboarina tamin’ny alalan’ireo “goudron” nalaina tamin’ny fanamboaran-dalàna teny an-toerana ny nahatontosana ny asa fanamboarana.Nanatontosa ny asa tamin’izany ireo ekipa teknika sy ny mpiara-miasa ao amin’ny boriborintany faha-6, tarihin’ny delegen’ny boriborintany, Andriamananjezika Fehizoro. Nanome fankasitrahana ny ben’ny Tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ao amin’ny boriborintany faha-6. Nisaotra ny tompon’andraikitra nahavita ny asa ny solontenan’ny fokonolona ao amin’ny fokontany Antanjombe Avaratra satria afa-pahasahiranana izy ireo, indrindra ireo ankizy mpianatra rehefa tonga ny fahavaratra amin’ny nahavitan’izao fotodrafitrasa izao .Tatiana AL’article Boriborintany faha6: vita ny lalankely ao Antanjombe Avaratra a été récupéré chez Newsmada.
Faran’ny herinandro : Oram-baratra ny eto an-drenivohitra
Araka ny vinan’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro dia ny alizay malefaka tsy marin-toerana no mandrafitra ny toetr’andro androany, sabotsy 24 novambra. Mitohy araka izany ny oram-baratra eto an-drenivohitra, ary hatramin’ny farany herinandro, ho an’ny faritanin’ Antananarivo, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary distrikan’i Nosy be. Ho an’ity herinandro ny 19 hatramin’ny 25 novambra izao kosa dia ho malefaka, na ho antonony ny rotsak’orana, izay 50 hatramin’ny 100mm izao amin’ny distrikan’i Nosy Be, Ambanja, Analalava, Mahajanga, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Iakora, Midongy Atsimo, Befotaka, ary ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinankaratra sy Amoron’i Mania, araka ny vinavinan’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro hatrany. Hiamafy kosa indray ny rotsak’orana, ary antonony na ho betsaka izay 75 hatramin’ny 150mm ho an’ny herinandro ny 26 novambra hatramin’ny 02 desambra ho avy izao, any amin’ny distrikan’i Bealanana, Fenoarivo Atsinanana, Vavatenina, Tsiroanomandidy, Ivohibe, Iakora, Befotaka, ary ny faritra Alaotra Mangoro, Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania sy Matsiatra Ambony. Tsy atahorana ihany koa ny mety hiforonan’ny rivodoza ny 19 hatramin’ny 25 novambra izao, raha ny eto Madagasikara, ary ambany ny tahany mahakasika ny fiforonan’ny herinandro manaraka dia ny 26 novambra hatramin’ny 02 desambra 2018 izany. Laurena Nany L’article Faran’ny herinandro : Oram-baratra ny eto an-drenivohitra est apparu en premier sur .L’article Faran’ny herinandro : Oram-baratra ny eto an-drenivohitra a été récupéré chez Triatra.
Nanafatrafatra ireo loholona ny filohan’ny HCC: “Aza akimpy ny maso, jereo ny fahoriam-bahoaka”
“Tokony ho tarigetranareo ny handamina ny fanjakana sy ny fiarahamonina mba hiaina amin’ny hitsiny sy ny fahamarinana, araka ny vanin’andro iainantsika izao. Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy miaina eo anivon’ny vahoaka ianareo”, hoy ny hafatry filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean-Eric, teny Ambohidahy, omaly, tamin’ny lanonam-pitsarana nanambarana ireo loholona 12 voafidy tamin’ny 11 desambra. Mba ho avy amin’ny zavatra hita sy tsapa no hipoiran’ny lalàna. Natao hiarovana ny vahoaka sy hampirindra ny fiarahamonina ny lalàna fa tsy ho an’ny tombontsoan’olom-bitsy.“Aza akimpy ny maso fa jereo ny fahoriam-bahoaka, ny fijalian’ny kamboty sy ny manano tena, ary ny malahelo sy ny fadiranovana. Olom-pirenena toa antsika ireny, iray ra amintsika. Takina aminareo izany rehetra izany”, hoy izy.Mavesatra ny adidin’ny loholonaAdidy lehibe faran’izay mavesatra ny miandry ireo loholona: fitazonana ny hasin’ny Antenimierandoholona izay tokony ho andrimpanjakana manana ny toerany sy ny hajany eto amin’ny firenena, ny famerenana ny fahatokisan’ny vahoaka ny olom-boafidy.Omen’ny lalàmpanorenana adidy hisolo tena ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ireo loholona. Mila jerena ny lafy tsara na ny lafy ratsin’ny fiantraikan’ny lalàna dinihina ho an’ny vondrom-paritra rehetra eo amin’ny asa tanterahina. Tsy ireo nifidy azy ireo ihany izany fa ny kaominina sy ny faritra rehetra eto Madagasikara.Tsy ifandroritana ny fanjakanaMiditra amin’ny vanim-potoana vaovao isika izao: fotoana hiverenan’ny hasim-piandrianan’ny firenena sy ny fanjakana. Tokony ho tonga saina amin’izany ny Malagasy rehetra, miara-mientana sy miray hina ary mandray ny andraikiny amin’izay tandrify azy avy.Tsy mba ifandroritana ny fanjakana fa ifandimbiasana sy ifanarahana, tsy ifanolanana fa ifanarahana sy ifandaminana.Tsy mitsanga-menatra ny amin’ny demokrasia i Madagasikara.Tsara hajanona ny manaratsy sy manambany lava ny firenena. Toy ny rehetra, misy hatrany ny tsara sy ny ratsy. Lalam-piainana izany fa tsy mety ny mandoto sy manaratsy lava ny firenena.R.Nd.L’article Nanafatrafatra ireo loholona ny filohan’ny HCC: “Aza akimpy ny maso, jereo ny fahoriam-bahoaka” a été récupéré chez Newsmada.